Tilmaamahan bilaashka ah, waxaan soo bandhignay deeqaha waxbarasho ee ugufiican ardayda qaangaarka ah ee Kanada ee ardayda uqalma ay uqori karaan dalab isla markaana ay u heli karaan fursad cadaalad ah in lagu qoro
Kaalmooyinka maaliyadeed looguma talagalin oo keliya ardayda da'da yar maaddaama ay jiraan deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda da'da ah. Marka, maqaalkani wuxuu ka kooban yahay macluumaad ku saabsan deeqaha waxbarasho ee ardayda qaangaarka ah ee Kanada. Marka, haddii aad tahay qof weyn oo aan lacag haysan oo aad nuujiso ujeedo inaad ku kasbato shahaadada, markaa, halkan waxaa jooga kaaliyayaal dhaqaale oo kaa caawin kara inaad ka baxdo.
Ardayda qaangaarka ah badanaa waa ardayda bilaabaya shahaadadooda koowaad ee jaamacadeed ee ka sarreysa 21 sano jir ama shahaadada qalin-jabinta ee ka weyn da'da 25. Hase yeeshe, da'da caqabad kuma aha waxbarashada. Inta badan ardayda qaangaarka ah waxay ka maqnaayeen dugsiga sanadaha qaar sababo jira awgood. Waxay noqon kartaa sababo qoys ama sababo shaqsiyeed awgood.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah ardaydan ayaa go'aansaday inay dib ugu noqdaan dugsiga si ay u qaataan shahaadooyin si ay ugu horumariyaan shaqadooda ama ay u beddelaan waddooyinkooda xirfadeed.
Hubi shaxda waxyaabaha hoose si aad u aragto waxyaabaha ugu muhiimsan ee maqaalka.
1 Ardayda qaangaarka ah ma heli karaan deeqo waxbarasho?
2 Ma jiraan deeqo ardayda qaangaarka ah?
3 Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Qaangaarka ah ee Kanada
3.1 NADC Lacagta Ardayga Caafimaadka (bixinta adeegga soo celinta)
3.1.1 Shuruudaha xaq u yeelashada
3.2 Abaalmarinta Jinsiyadda
3.2.1 Shuruudaha xaq u yeelashada
3.3 Deeqaha Farshaxanka ee Farshaxanka
3.4 Abaalmarinta Alberta ee Daraasaadka Xuquuqda Aadanaha ee Kanadiyaanka iyo Dhaqamada Kala Duwan
3.5 Lacagta NADC
3.6 Naadiga Rotary ee Deeqaha waxbarasho ee Vernon
3.6.1 Shuruudaha xaq u yeelashada
3.7 Sanduuqa Deeqda waxbarasho ee Noolaha ah
3.7.1 Shuruudaha xaq u yeelashada
3.8 CanLearn (Deeqaha Ardayda Kanada)
3.8.1 Shuruudaha xaq u yeelashada
3.9 Wadada Tareenka ee Waqooyiga Ameerika
3.10 Barnaamijka Bixinta Gaarka ah ee Ontaariyo (OSBP)
3.10.1 Shuruudaha xaq u yeelashada
3.11 St. Thomas - Elgin Deeqaha Dalxiis ee Dalxiiska
3.11.1 Shuruudaha xaq u yeelashada
3.12 Talo soo jeedin
Ardayda qaangaarka ah ma heli karaan deeqo waxbarasho?
Haa. Dadka badankood waxay had iyo jeer ka fikiraan in deeqaha waxbarasho loo qoondeeyay oo keliya ardayda da'da yar.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr kaalmo dhaqaale oo loogu talagalay ardayda qaangaarka ah ee doonaya inay dib u bilaabaan tacliinta kulliyadaha ama jaamacadaha. Waxaad ku arki doontaa badankood deeqdan waxbarasho ee loogu talagalay ardayda qaangaarka ah maqaalkan.
Ma jiraan deeqo ardayda qaangaarka ah?
Dabcan. Waxaa jira deeqo badan oo loo heli karo ardayda qaangaarka ah si ay ugu suurtagasho maalgelinta waxbarashadooda si ay u helaan shahaado.
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Qaangaarka ah ee Kanada
Deeqaha ardayda qaangaarka ah ee Kanada waxaa ka mid ah:
NADC Lacagta Ardayga Caafimaadka (bixinta adeegga soo celinta)
Abaalmarinta Jinsiyadda ee Qalinjabinta Ardayda Qaangaarka ah ee Kanada
Deeqaha Farshaxanka ee Farshaxanka
Abaalmarinta Alberta ee Daraasaadka Xuquuqda Aadanaha ee Kanadiyaanka iyo Dhaqamada Kala Duwan
NADC Lacag Siinta Ardayda Qaangaarka ah
Naadiga Rotary ee Deeqda waxbarasho ee Vernon ee Ardayda qaangaarka ah ee Kanada
Sanduuqa Deeqda waxbarasho ee Noolaha ah
CanLearn (Deeqaha Ardayda Kanada)
Wadada Tareenka ee Waqooyiga Ameerika
Barnaamijka Bixinta Gaarka ah ee Ontaariyo (OSBP)
St. Thomas - Elgin Dalxiiska Deeqaha Dalxiiska ee loogu talagalay Ardayda Qaangaarka ah ee Kanada
Lacagta Caafimaadka iyo Ilkaha ee Ardaydu waa adeeg soo noqosho oo ku dhiirrigeliya ardayda caafimaadka ee Alberta inay ku tababaraan woqooyiga Alberta markay dhammeeyaan barnaamijkooda shahaadada caafimaadka.
Ku guuleystayaasha kaalmada maaliyadeed dib uma bixin doonaan deeqaha haddii ay oggolaadaan inay ku noolaadaan oo ka shaqeeyaan woqooyiga. Qiimaha bursashada waa $ 12,000 ama $ 24,000 sanadkiiba muddo afar (4) sano ah oo ah barnaamijka caafimaadka. Bixintaani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu fiican ardayda qaangaarka ah ee Kanada.
Codsadeyaashu waa inay deganaayeen Alberta 12 bilood oo isku xigta ka hor bilowgii barnaamijkooda
Musharrixiinta waa in lagu qoraa barnaamij caafimaad oo loogu talagalay maalgelinta gobolka
Codsadeyaashu waa inay diyaar u ahaadaan inay ku noolaadaan kana shaqeeyaan woqooyiga Alberta markay dhammaystiraan degganaanshahooda isla markaana saxeexaan qandaraaska adeegga soo noqoshada
Musharrixiinta waa in aysan waligood noqon kuwa aan bixin amaahda ardayda gobolka
Abaalmarinta Jinsiyadda ee Qalinjabinta waxaa loogu talagalay in lagu aqoonsado tabarucaadka ardayda ka qalin jabisa ay ku sameeyaan Alberta iyada oo loo marayo adeegyo iskaa wax u qabso ah oo ay ku jiraan dowladda ardayda, bulshooyinka ardayda, naadiyada, ururada, ama shaqada bulshada.
Qaatayaasha waxaa soo xusha Ururka Ardayda Qalinjabinta ee hay'adda sare ee barashada ee dadka qaata ay hadda dhigtaan. Jaamacadaha abaalmarinta lagu dabaqo waxaa ka mid ah Jaamacadda Alberta, Jaamacadda Lethbridge, Jaamacadda Calgary, iyo Jaamacadda Athabasca.
Qadarka deeqda waxbarasho waa 2,000CAD. Waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya ardayda qaangaarka ah ee Kanada.
Musharrixiinta waa inay noqdaan muwaadiniin reer Kanada ah oo deggan Alberta
Codsadeyaashu waa inay iska diiwaangeliyaan daraasadaha qalin-jabinta ee waqtiga buuxa ee jaamacadda Alberta.
Musharrixiinta waa inaysan xaadirin dugsiga sare hadda
Deeqaha Farshaxanka ee Farshaxanka waxaa la siiyaa ardayda ku nool Alberta waana la diiwaangeliyaa ama qorsheynayaa inay iska diiwaangeliyaan daraasado qalin-jabis ah oo waqti-buuxa ah oo ah muusig, riwaayad, dhaanis, farshaxan suugaaneed, ama farshaxanno muuqaal ah.
Deeqaha waxaa loo isticmaali karaa daraasadaha qalin-jabinta ee hay'adaha adduunka oo idil.
Ku guuleystayaasha deeqda waxbarasho waxay heli doonaan 15,000CAD.
Deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo ardayda qalin-jabisay ee u keeni doonta qiimaha Albertans iyada oo kor u qaadeysa fikirka la wargelinayo ee ku saabsan xuquuqda aadanaha ee Kanada, kala duwanaanta dhaqamada, iyo dhaqamada badan. Waxay sidoo kale ka caawin doontaa ardayda inay raacaan daraasadaha qalin-jabinta ee xuquuqda aadanaha ee Kanada, kala duwanaanta dhaqamada, iyo dhaqamada kala duwan, iyo kobcinta awooda si ay uga shaqeeyaan xuquuqda aadanaha ama shaqooyinka dhaqamada kala duwan ee Kanada.
Intaa waxaa sii dheer, deeqda waxbarasho waxaa kafaala qaaday iyada oo loo marayo deeq bixin ay bixisay Sanduuqa Xuquuqda Aadanaha iyo Sanduuqa Dhaqamada Kala Duwan waxaana si wada jir ah u maamulaya Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Alberta iyo Alberta Advanced Education. Waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ardayda qaangaarka ah ee Kanada.
Qiimaha deeqda waxbarasho waa 10,000CAD.
NADC Bursary waa lacag celin adeeg dib loogu celinayo oo la siiyay ardayda labadii sano ee ugu dambeysay ee waxbarashada dugsiga sare kadib. Waxaa loogu talagalay in lagu maalgeliyo waxbarashada ardayda si loogu tababaro shaqooyinka baahida sare leh ee waqooyiga Alberta sida waxbarashada, shaqada bulshada, caafimaadka & caafimaadka, injineernimada, iyo goobo farsamo.
Codsadeyaasha uqalma waxaa la siin doonaa $ 6,000 sanadkiiba ugu badnaan laba sano.
Maaddaama mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu fiican ardayda qaangaarka ah ee Kanada, guuleystayaasha ay go'aan ka gaari doonaan guddiga xulashada oo ku saleysan codsadayaasha:
barnaamijka waxbarashada iyo baahida loo qabo barnaamijka shaqo ee waqooyiga Alberta
aqoonta waqooyiga Alberta
jawaabaha su'aalaha qormada, iyo
Naadiga Rotary ee Deeqaha waxbarasho ee Vernon
Naadiga Rotary Club ee Venom Deeqaha waxaa heli kara dadka degan agagaarka Vernon ee raadinaya barnaamij ganacsi ee Kaamka Campus ee Kulliyada Okanagan.
Mu'asasadani waxay sii wadi doontaa hadafkeeda ah inay ardayda siiso kaalmo dhaqaale oo badan sanadkiiba. Wadarta guud ee gargaarka la siiyay waa $ 10,500. Waxaa ka mid ah:
Hal deeq waxbarasho oo ah $ 1000 midkiiba shanta dugsi sare ee deegaanka ah.
OKCollege: Laba deeq waxbarasho oo midkiiba $ 1,000 yahay.
Kuleejka OK: Hal deeq waxbarasho oo ah $ 1000 oo loogu talagalay tababarka Dayactirka Diyaaradaha.
Kuleejka OK: Laba deeq waxbarasho oo cusub oo ah $ 1,000 midkiiba oo loogu talagalay tababarka xirfadaha.
Dugsiga Muusikada ee Vernon: Hal deeq waxbarasho oo ah $ 500.
Deeqda waxbarasho waa la cusboonaysiin karaa oo dadka qaata waxaa soo xulaya hay'adaha kala duwan ee ma dooran doonaan kooxda Rotary. Intaas waxaa sii dheer, deeqdani waxay dabooli doontaa waxbarashada iyo buugaagta.
Codsadeyaashu waa inay kaqeyb galaan barnaamij ganacsi ugu yaraan 12 saacadood oo amaah xilli-dugsiyeed kasta dayr iyo guga.
Musharrixiinta waa inay lahaadaan ugu yaraan GPA isugeyn ah oo ah 3.0 ama ka sareeya.
Ciyaaraha Caalamiga ah ee Ontario ee loo maro Elgin-St. Thomas Community Foundation waxay bixisaa Sanduuqa Deeqaha Deeqaha ee Firfircoon.
Kaalmadan lacageed waxaa loogu talagalay inay ku taageerto dadka waaweyn ee ku jira hay'adaha sare aagga dhaqdhaqaaqa jirka.
Codsadeyaashu waa inay noqdaan muwaadiniin ama degane rasmi ah ee Kanada iyo sidoo kale deganayaasha Elgin County.
Musharrixiinta waa in lagu qoraa kulliyad ama jaamacad la aqoonsan yahay oo leh urur isboorti oo la aqoonsan yahay.
Codsadeyaashu waa inay dhammaystiraan Fasalka 12 ee sannadkii hore.
Musharrixiinta waa inay lahaadaan karti hoggaamineed ayna muujiyaan rabitaan ku aaddan muhiimada kaqeybgalka iyo kaqeybgalka muhiimada guusha.
Deeqda Ardayga ee Kanada ee Daraasadaha Waqti-dhiman waxaa heli kara ardayda qaangaarka ah ee ka diiwaangashan barnaamij waqti-dhiman ama shahaadada qalin-jabinta ah oo ugu yaraan 12 toddobaad dheer ah muddo 15 usbuuc gudahood ah hay'ad loogu talagalay Kanada. Waxaa kafaala qaaday dowladda Kanada.
Qiimaha deeqdani waa 1,200 CAD sanad dugsiyeed kasta. Waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ardayda qaangaarka ah ee Kanada.
Musharrixiinta ayaa codsan doona oo u qalmi doona kaalmada maaliyadeed ee ardayda (waxay leeyihiin ugu yaraan $ 1 oo ah baahida dhaqaale ee la qiimeeyay).
Codsadeyaashu waa inay ka yimaadaan qoysaska dakhligoodu hooseeyo sida lagu qeexay Barnaamijka Amaahda Ardayda Kanada.
Musharrixiinta waa in lagu qoraa shahaado, diblooma, ama barnaamijka shahaadada (ugu yaraan 12 toddobaad dheer muddo 15 toddobaad oo isku xigta ah) xarun loogu talagalay dugsiga sare kadib.
Wadada Tareenka ee Waqooyiga Ameerika waxay siisaa deeqo waxbarasho si loogu dhiiri galiyo ardayda qaangaarka ah ee wanaagsan Ardaydan qaangaarka ah waa haween ugu-fasalka wanaagsan, halyeeyo militari, iyo ardayda hidaha iyo dhaqanka, kuwaas oo wax ka baranaya goobo gaar u ah ganacsiga muhiimka ah ee CN oo ay ka mid yihiin, Injineerinka, Gaadiidka, Iibka & Suuqgeynta, Kheyraadka Aadanaha, Daraasaadka Aborijiniska, Sharciga, iyo Xisaabaadka & Maaliyadda.
Barnaamijka Bixinta Gaarka ah ee Ontaariyo (OSBP) waxaa loogu talagalay ardayda qaangaarka ah inay raacaan shahaadooyinka shahaadada koowaad, diblooma, ama shahaadooyinka barnaamijka tababarka.
Intaa waxaa sii dheer, ardaydu waa inay qaadaan barnaamijyada tacliinta waqti dhiman iyagoo qaata wax ka yar 60% culeyska-koorsada (ardayda joogtada ah ee naafada ah - in ka yar 40% koorso-xamuul ah).
Codsadeyaashu waa inay ka yimaadaan qoysaska dakhligoodu hooseeyo. dakhliga
Musharrixiinta waa inaysan lahayn imaatin hore ee dugsiga sare
Codsadeyaashu waa inay muujiyaan caddaynta taageerada sababta ay ugaqeybgalayaashu u yihiin waqti-dhiman oo keliya.
Bixinta ayaa dabooli doonta kharashka khidmadaha wax lagu barto, buugaagta, haynta carruurta, iyo kharashyada gaadiidka.
St. Thomas - Elgin Deeqaha Dalxiis ee Dalxiiska
St. Thomas-Elgin Dalxiiska Deeqaha waxaa loogu talagalay inay ka caawiso ardayda inay sii wataan waxbarasho sare oo ku saabsan aagagga waxbarashada ee taageera safarka iyo dalxiiska. Deeqdan waxaa bixiya Ururka Dalxiiska St. Thomas-Elgin.
Codsadeyaashu waa inay noqdaan muwaadinad Kanada ah oo ay degaan ka noqdaan Degmada Elgin.
Musharrixiinta waa in lagu qoraa barnaamijka la xiriira dalxiiska.
Codsadeyaashu waa inay muujiyaan caddaynta dhammaystirka barnaamijka sanadka koowaad iyo isqorista sannadka labaad ee barnaamijka la xiriira dalxiiska ee dugsiga sare kadib ee hay'ad la aqoonsan yahay.
Deeqaha ugu sareeya Ardayda aan Dhaqanka aheyn
Shaqooyinka Injineernimada Bixinta Ugu Badan Kanada
Sida Loogu guuleysto Ph.D. Deeqaha waxbarasho ee Kanada
Deeqaha fiqiga ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
Deeqaha Canadianka Talooyinka deeqaha waxbarasho Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
ardayda qaangaarka ah deeqaha waxbarashodeeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda qaangaarka ah ee canada
Previous Post:Waa maxay Qiimaha Dibloomada Dibloomada Sare
Post Next:13 Kulliyadaha injineernimada ugufiican USA oo leh deeq waxbarasho